ိရယ်စရာ Archives - S3k Network
November 20, 2021 s3knetwork2021 0
တက်ကစီ ငှားစီးမိတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျ ရဲ့ ကိုယျတှေ့ ဖွဈရပျ ကမြ ဒီနေ့ နခေ့ငျး မွောကျဥက်ကလာ ကနေ လှညျးတနျးသှားတော့ တက်ကစီ ငှားစီးသှားတယျ။ ကမြက ဖစေ့ဖုတျ ကွညျ့နကေလြူဆိုတော့ တက်ကစီကို သခြောရှေးပွီး ငှားရတယျ။ ကားထဲမှာလူပိုပါသလား။ အဲကှနျးဖှငျ့ထားသလားကွညျ့ရတယျ။ ဆေးခပျ မှာကွောကျလို့။ အဲဒါနဲ့ […]
November 6, 2021 s3knetwork2021 0
ဦးဆိုတဲ့ ချေါသံကွားရငျ အခုထိ ကွကျသီးဖွနျးဖွနျး ထတုနျးဆိုတဲ့ ဦးလေးကွီးရဲ့အဖွဈ ဦးဆိုရငျ ကွောကျနရေသညျ …. ဖုနျးဝငျလာလို့ ကောကျကိုငျ လိုကျတာ ဖဘေု့တျ ပျေါ မှာ မနကေ့မှ ခဈြသူ ဖွဈသှားတဲ့ ခေးလေးရဲ့ ဖုနျးဖွဈနတေော့ ကြုပျ ပြျော သှားတယျ။ “ဦး” “ပွော […]
October 31, 2021 s3knetwork2021 0
တစ်ခါတုန်းက တစ်နယ်ရပ်ခြားဆီက အပျိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ လူပျိကြီးတစ်ယောက်ဟာ ခရီးသွားရင်း ရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်။ သွားရမယ့်ခရီးကလဲတူနေတော့ စကားပြောရင်း အတူနားရင်း ခရီးဆက်ခဲ့ကြသတဲ့။ ညနေရီမိုးချုပ်တဲ့အခါ ရောက်တဲ့အရပ်ဒေသကနယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာ ခရီးတစ်ထောက်နားရင်း အိပ် စက်ဖို့အတွက် တည်းခိုရမယ့်နေရာလိုက်ရှာတဲ့အခါ ရှားရှားပါးပါး တစ်ယောက်အိပ်ခန်းတစ်ခန်းသာကျန်တော့တဲ့ တည်းခိုခန်းတစ်ခုကိုပဲတွေသတဲ့..။ မတပ်နိုင်တဲ့အဆုံး အဲဒီ့အခန်းမှာပဲ နှစ်ယောက်အိပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြရတယ်။ အခန်းကကျဉ်းပြီး ကုတင်မပါတဲ့တည်းခိုခန်းထဲမှာ စောင်ပါးလေးတစ်ထည်နဲ့ […]
သမီးက ကလေးရှိသေးတယျ ဆိုတဲ့ KTV က ၁၆ နှဈမလေး မန်တလေးမွို့ရှိကတေီဗီဆိုငျတှငျ အသကျ ၅၀နညျးပါးရှိ ဘောစိလူကွီးတဈယောကျသညျ အသကျ၁၆ နှဈသာရှိသေးသော ကတေီဗီမယျလေးအား ခဈြရေးပနျကာလကျထပျခှငျ့တောငျးဆိုတယျ ! ကောငျမလေးကလညျး အကွိမျကွိမျငွငျးဆိုနတောပေါ့ !”ဦးရယျ မဖွဈနိုငျပါဘူး ခုမီးက…ခလေးရှိသေးတယျ” ဘောစိ ဦးလေးကွီးလညျး” မီးကိုသာရမယျဆို ဘယျပုဒျမတှမေဆို […]
ညကွီးမှာ နောကျကလိုကျလာတဲ့လူကွောငျ့ သရဲဟနျဆောငျပွီး သငျးခြိုငျးထဲဝငျမိတဲ့ မိနျးကလေးရဲ့နောကျဆကျတှဲ အဖွဈအပကျြမြား
ညကြီးမှာ နောက်ကလိုက်လာတဲ့လူကြောင့် သရဲဟန်ဆောင်ပြီး သင်းချိုင်းထဲဝင်မိတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့အဖြစ်.. ညဖက် အလုပ်ဆင်းပြန်လာတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်မှာ လူတစ်ယောက် ကပ်ပါလာတယ်။ ဒါကို ကောင်မလေးက သတိထားမိပြီး လန့်နေမိတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အပြန်လမ်းမှာ သင်္ချိုင်းတစ်ခု ဖြတ်ရတယ်။ ကောင်မလေးက ဖြတ်ထိုးဉာဏ်သုံးပြီး ဂူတစ်ခုရှေ့ရပ်လိုက်တယ်။ အဲ… ဒီနောက် ဂူကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီး […]
အပွိုလေးတှမသေိသေးတဲ့ မငျြဂလာဦးည မကွကြှငြးတှညေိုပှီး သတိပါလစသြှားခဲ့ရသော သတို့သမီး
October 25, 2021 s3knetwork2021 0
မင်ျဂလာဦးည (၃)ဦးအကွောငျး အပြိုလေးတှမေသိပါဘူး ပူပူနှေးနှေး မင်ျဂလာဆောငျ ပွီးကာစ ကောငျမလေးကို သူ့သူငယျခငျြး အပြိုမ တဈသိုကျက တိုးတိုးတိတျတိတျမေးသညျ။ “ဟဲ့… နငျ့မှာ မကျြတှငျးတှကေိုကလြို့ တဈညလုံးမအိပျဘူးလား??? မင်ျဂလာဦးည အတှအေ့ကွုံလေး ငါတို့သိရအောငျပွောပွပါလား?” “တျောပါပွီဟာ မပွောခငျြပါဘူး” “ပွောပါဟာ နငျကလညျး ငါတို့တှဗေဟုသုတရတာပေါ့” “အို… ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျပွောရမှာ […]
“ညားကာစ လင်မယားကို စကားတစ်ခွန်းထဲနဲ့ ကွဲအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဘကြီး”
October 12, 2021 s3knetwork2021 0
လက်ထပ်ပြီးတာမကြာသေးသောလင်မယား၂ ယောက် အိမ်ရှေ့မှာ အေးအေးလူလုထိုင်စကားပြောနေတုန်း ခြံရှေ့မှာအဘိုးကြီးတယောက် လာရပ်ကာ သမီး ဘကြီးဆီခဏလောက်ကွယ် မိန်းမဖြစ်သူက ဘကြီးအိမ်လိပ်စာမေးချင်လို့ ထင်ပါရဲ့ဟု ထိုင်ရာကထသွားတော့ အဘိုးကြီးကဒီလိုပါသမီးရယ် “ဘကြီးပြောတာ ဘယ်သူ့မှပြန်မပြောပါနဲ့ ” အဘိုးကြီးက ထိုမျှသာပြောကာ သူတို့အိမ်ရှေ့က ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားလေရာ … မိန်းမဖြစ်သူမှာ ဘာကိုနားလည်ရမှန်းမသိဘဲ သူ့ယောက်ျားဘေး ပြန်လာထိုင်လေသည် […]
September 17, 2021 s3knetwork2021 0
တော်လိုက်တဲ့ကိုရင်😁 ဆရာတော်က တပ်ထဲကတပ်မှူးဆွမ်းသွပ်ကိုသီလသွားပေးမယ်ဆိုတော့ကိုရင်က လျောက်တယ် ‘။ “ဘုန်းဘုန်းဘုရား သြကာသပြီးတာနဲ့ ပြန်သာကြွခဲ့ပါဘုရား” တဲ့… ဆရာတော်က ဘာကွ သီလပေးရအုန်းမယ်ဟလို့ပြောတော့ “ပေးမနေပါနဲ့ဘုရား အရှင်ဘုရားပေးလည်းပေးတဲ့သီလကသဲထဲရေသွန်သလိုဖြစ်မှာဖြာ့။”ဘာတဲ့ ကိုရင် မင်းစကား ရှင်းစမ်းပါအုန်းဟလို့မိန့်တဲ့အခါကိုရင်ပြောတာကဘုန်းဘုန်းပဲ စဉ်းစားကြည့် ”ဒီလောက်ပြည်သူတွေကို သတ်နေတာ ပါဏာတိပါတာချပေးလည်း အလကားပါပဲ ဘုရား ၊ အဒိန္နာဒါနာချပေးလည်း […]
August 29, 2021 s3knetwork2021 0
စကတ်လှန်ပြီးပညာပေးလိုက်တဲ့ ဆီဆိုင်ကကောင်မလေး စကတ်လှန်ပြီးပညာပေးလိုက်တဲ့ဆီဆိုင်ကကောင်မလေးစကတ်လှန်ပြရင်ပိုက်ဆံတစ်သောင်းမေးမယ်လို့ပြောတဲ့လူပျိုကြီးအားစကတ်လှန်ပြီးပညာပေးလိုက်တဲ့ဆီဆိုင်ကကောင်မလေးကားပေါ်မှာလူပျိူကြီးနဲ့ကောင်မလေးအတူတူဆုံတော့ကောင်မလေးကသူ့ခြေသလုံးဝင်းဝင်းလေးကိုမမြင်မြင်အောင်ပြတယ်။ အဲဒီမှာလူပျိူကြီးကအတင့်ရဲပြီးနင့်စကပ်ကိုအပေါ်နည်းနည်းတင်ပေးရင်ပိုက်ဆံတစ်သောင်းပေးမယ်ဆိုတော့ကောင်မလေးကပိုက်ဆံကိုတခါတည်းတောင်းပြီးစကပ်ကိုအပေါ်တင်ပေးတယ်။နောက်ညုတုတုနဲ့ ကြည့်ပြီးကောင်မလေးကရှင်နောက်ထပ်တစ်သောင်းထပ်ပေးရင်ရှင့်ကို ကလေးမွေးတဲ့နေရာပြမယ်ဟာလူပျိူကြီးတံတွေးသီးသွားပြီးပိုက်ဆံတစ်သောင်းကိုလည်းလျှောလျှောလျူလျူထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ကာင်မလေးက ကားရဲ့ညာဘက်ခြမ်းကိုလက်ညိုးထိုးပြလိုက်တယ်။တွေ့လားရန်ကုန်အမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးခွီးသောက်ကျိုးနဲဂျင်းမိပြီဟဒါကြောင့်လူပျိုကြီးများသတိထားပြီးမိန်းကလေးငယ်လေးတွေတွေ့တိုင်းကြည့်ရှောင်ပါစွတ်မဖွန်မိပါစေနဲ့ခုခေတ်မိန်းကလေးအများစုဟာကျတော်တို့လို လူပျိုကြီးများကိုအဓိကပစ်မှတ်ထားနေတာပါလူပျိုကြီးများ ဘေးရန်ကင်းရှင်းကြပါစေရယ်မောခြင်းဖြင့်ဘဝအမောတွေပြေပျောက်ပါစေအနည်းငယ်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားမိပါသည်ခရစ်တစ် ====== စကတလြှနပြှီးပညာပေးလိုကတြဲ့ ဆီဆိုငကြကောငမြလေး စကတလြှနပြှီးပညာပေးလိုကတြဲ့ဆီဆိုငကြကောငမြလေးစကတလြှနပြှရငပြိုကဆြံတစသြောငြးမေးမယလြို့ပှောတဲ့လူပွိုကှီးအားစကတလြှနပြှီးပညာပေးလိုကတြဲ့ဆီဆိုငကြကောငမြလေးကားပေါမြှာလူပွိူကှီးနဲ့ကောငမြလေးအတူတူဆုံတော့ကောငမြလေးကသူ့ခှသလေုံးဝငြးဝငြးလေးကိုမမှငမြှငအြောငပြှတယြ။ အဲဒီမှာလူပွိူကှီးကအတငြ့ရဲပှီးနငြ့စကပကြိုအပေါနြညြးနညြးတငပြေးရငပြိုကဆြံတစသြောငြးပေးမယဆြိုတော့ကောငမြလေးကပိုကဆြံကိုတခါတညြးတောငြးပှီးစကပကြိုအပေါတြငပြေးတယြ။နောကညြုတုတုနဲ့ ကှညြ့ပှီးကောငမြလေးကရှငနြောကထြပတြစသြောငြးထပပြေးရငရြှငြ့ကို ကလေးမှေးတဲ့နရောပှမယဟြာလူပွိူကှီးတံတှေးသီးသှားပှီးပိုကဆြံတစသြောငြးကိုလညြးလွှောလွှောလွူလွူထုတပြေးလိုကတြယြ။ကာငမြလေးက ကားရဲ့ညာဘကခြှမြးကိုလကညြိုးထိုးပှလိုကတြယြ။တှလေ့ားရနကြုနအြမွိုးသမီးဆေးရုံကှီးခှီးသောကကြွိုးနဲဂငြွးမိပှီဟဒါကှောငြ့လူပွိုကှီးမွားသတိထားပှီးမိနြးကလေးငယလြေးတှတှတေို့ငြးကှညြ့ရှောငပြါစှတမြဖှနမြိပါစနေဲ့ခုခတမြေိနြးကလေးအမွားစုဟာကတွောတြို့လို လူပွိုကှီးမွားကိုအဓိကပစမြှတထြားနတောပါလူပွိုကှီးမွား ဘေးရနကြငြးရှငြးကှပါစရယေမြောခှငြးဖှငြ့ဘဝအမောတှပှပွေေောကပြါစအနေညြးငယပြှငဆြငဖြှညြ့စှကထြားမိပါသညခြရစတြစြ